Cast Cast Preseasoned Fry Pan Factory - China Cast Iron preseasoned Fry Pan Ndị na-emeputa ihe, ndị na - enye ya
Ihe Ngwaahịa: JT 4002A Ihe: Cast iron Size: 22 * ​​2.9 na-eburu: igbe onyinye ma ọ bụ igbe aja aja Nkọwapụta ngwaahịa: :dị mma dị mma na otu akwa dị elu maka ngwaahịa niile n'ihi na a na-eme ihe nkedo ahụ site na diski na-akpụzi diski.
Ihe Ngwaahịa: JT 6250, JT7251 Ihe: Cast iron Size: 16 * 3.8, 18 * 4.3 Mbukota: igbe onyinye ma ọ bụ igbe aja aja Nkọwapụta ngwaahịa: Ọmarịcha ala na edo edo dị mma maka ngwaahịa niile n'ihi na nkedo ahụ bụ nke DISA na-eme. ahịrị ịkpụzi.
Ihe Ngwaahịa: JT 60W, JT 63 W Ihe: Cast iron Size: 22.8 * 2, 24.5 * 1.8 Mbukota: onyinye onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Nkọwapụta ngwaahịa: Ọmarịcha ala na edo edo dị mma maka ngwaahịa niile n'ihi na a na-eme ozu ahụ. Usoro ịkpụzi diski.
Ihe Ngwaahịa: JT 70, JT 72, JT 71 Ihe: Cast iron Size: 16.5 * 4.2, 20.5 * 4, 25 * 4.6 Mbukota: igbe onyinye ma ọ bụ igbe aja aja nkọwapụta ngwaahịa: smoothdị mma dị mma na otu akwa dị elu maka ngwaahịa niile n'ihi a na-eme nkedo ahụ site na larịị ịkpụzi diski.
Ihe Ngwaahịa: JT 140, JT 190 Ihe: Cast preseasoned Size: 15 * 2.9, 19.5 * 4.5 Nkwakọ ngwaahịa: onyinye onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja nkọwapụta ngwaahịa: inedị mma dị mma na otu akwa dị elu maka ngwaahịa niile n'ihi na a na-eme ozu ahụ. Usoro ịkpụzi diski.
Ihe Ngwaahịa: JT 87A Ihe: Ihe prefaasoned iron: 23 * 3.3 ịkwakọ: igbe onyinye ma ọ bụ igbe aja aja Nkọwapụta ngwaahịa: Ọmarịcha ala na edo edo dị mma maka ngwaahịa niile n'ihi na a na-eme diski site na diski na-akpụzi diski.
Ihe Ngwaahịa: JT 01, JT 01W Ihe: Cast iron preseasoned Size: 21 * 15 * 1.8, 25 * 18.5 * 1.8 A na-eme eriri eji akpụzi diski.
aha ngwaahịa kpụrụ iron square skillet setịpụrụ dayameta 26x26cm ịdị elu 5cm, mkpuchi mkpuchi preseasoned igbe agba aja aja ma ọ bụ igbe agba akara ahaziri ahaziri ikike Superb okpomọkụ njigide kpo oku Kwesịrị ekwesị maka stovetops zuru oke maka isi nri na ijere akụkụ nke akwụkwọ nri, akụkụ, na ihe ụtọ na-enye njigide okpomọkụ na-enweghị atụ na ọbụna kpo oku; mkpuchi mkpuchi na ekpomeekpo ebe ejiri aka na-enye ohere maka ibufe FDA masịrị tupu ihe eji eme ihe eji eme ihe oge a na-enye ohere iji ngwa ngwa nwere ike ịbụ anyị ...